Isengezo se-Pet Isivumelwano Sokuqasha- Izinqubomgomo Zezilwane ezihamba phambili - i-NJ & NY Real Estate, i-phenate, i-Foreclosure Defense kanye nabameli be-Bankruptcy
Ikhaya / Blog / Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York / Isengezo se-Pet Isivumelwano Sokuqasha- Izinqubomgomo Zezilwane Ezihamba Phambili
Incazelo: Isihloko ngencazelo yesengezo sezilwane kanye nezinzuzo zokuba nesisodwa esilinganiselwe esivumelwaneni sokuqashisa. Iphinde ibhale phansi amagama asemqoka okufanele kushiwo kuwo
Isengezo se-Pet Isivumelwano Sokuqashisa- Izinqubomgomo Zezilwane Zokuziphatha: Okuhle kakhulu
Yini isengezo sezilwane zasekhaya?
Lapho kuqashwa ikhaya, umqashi womhlaba kanye nomqashi bangena esivumelwaneni sokuqashisa esibeka imibandela yokuqashisa. Imvamisa, isivumelwano sokuqashisa siqukethe isigatshana esisho ukuthi izilwane ezifuywayo zivunyelwe yini kule ndawo noma cha. Kodwa kwesinye isikhathi, kuthula embuzweni wezilwane ezifuywayo. Kuzona zombili lezi zimo, isengezo sezilwane ezifuywayo sisiza kuwo womabili amaqembu ukusetha inqubomgomo yezilwane ezifuywayo.
Isengezo sezilwane wumbhalo owengeziwe ongeziwe esivumelwaneni sokuqashisa futhi ubopha ngokomthetho kuzo zombili izinhlaka. Isho imvume yomninindlu yokuvumela izilwane ezifuywayo epulazini lakhe ngenkathi umqashi evuma ukulandela imigomo ebekwe kokungezwe. Njengoba umnikazi womhlaba engumnikazi wesakhiwo, unamandla amakhulu okuxoxisana ngemigomo yokungezelelwa. Kufanele ayenze isayinwe yibo bonke abaqashi, kungakhathalekile ukuthi banesilwane noma cha. Ngale ndlela, uma umqashi ethatha isinqumo sokuthola isilwane ngokuhamba kwesikhathi, uyobe azi ngezimo okudingeka azigcine.
Ubani okufanele athole isengezo sezilwane zasekhaya?
Ukuba nenqubomgomo yezilwane ezikhona ezihlomulisa umninindlu nomqashi. Njengoba abantu abaningi benezinto ezifuywayo eziqashiwe nezindlu eziqashiwe, ukungavumeli izilwane ezifuywayo epulazini eziqashisayo kuzonciphisa kakhulu inani lababaqashi abangabaqashisi. Ngakolunye uhlangothi, abaqashi bazohlala isikhathi eside kule ndawo njengoba ababanikazi bemizi abaningi bengavumeli izilwane ezifuywayo. Bangakhokha ngisho nangaphezulu indawo enobungane bezilwane.
Yimiphi imiphumela yokungatholi kwesengezo sezilwane?
Uma kungekho-sengezo sezilwane ezifuywayo, bobabili umninindlu kanye nomqashi bazolahlekelwa. Umninindlu angahle alahlekelwe yisikhathi ukuthola umqashi omusha. Ngokufanayo, lapho-ke umqashi uzolahlekelwa isikhathi ukuthola ikhaya elisha. Kuzodingeka ukuthi basebenzise imali eyengeziwe- umnikazi womhlaba noma yimuphi umonakalo owenziwe epulazini; umqashi ngokuba akhokhe inhlawulo. Umninindlu angahle abhekane nomakhelwane bacasulwe yimisebenzi yezilwane ezifuywayo ngenkathi umqashi angahlala esimeni sokunikezela ngokuphelele isilwane.
Yini okufanele ifakwe kwinqubomgomo yezilwane ezifuywayo?
Ukuvumela izilwane ezifuywayo kuleso sakhiwo kubeka ubungozi obuthile njengokulimazeka kwempahla yakho. Ukuze ugweme lezi, umnikazi womhlaba kufanele acabangele ukufaka phakathi okuthile imigomo esivumelwaneni sokungezelelwa kwesilwane.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, yisho amagama omqashisi kanye nomqashi; ukuhlonza isilwane- igama laso, uhlobo lwaso, unyaka, umbala kanye nosuku isivumelwano esizoqala ngalo ukusebenza.
Izinhlobo zezilwane ezifuywayo zivunyelwe: Abanini bamakhaya abaningi bavumela izilwane ezifuywayo ezijwayelekile nje njengenja, amakati, ama-hamsters, izingulube ze-Guinea, inhlanzi nezinyoni. Chaza izinhlobo zezilwane ezifuywayo ezivunyelwe kanye nenani lezilwane ezifuywayo. Umnini wendawo unamandla okuvimbela izinja 'zohlobo oluyingozi.'
Ngokusobala, yisho ukuthi yizilwane ezifuywayo zomqashi ezivunyelwe kule ndawo. Futhi, chaza ukuthi izivakashi zivunyelwe yini ukuletha izilwane ezifuywayo.
Khetha izindawo ezithile lapho izilwane ezifuywayo zingagcinwa khona.
Faka nezinhlinzeko ezinika umazisi wokucacisa okucacile izilwanyana ezifuywayo nobufakazi bokugoma. Lokhu kugoma kufanele kuhambisane nemithetho yendawo futhi umqashi kufanele ahlinzeke ubufakazi obufanayo. Kufanele abe nayo yonke imibhalo edingekayo ephathelene nesilwane esifuywayo.
Isibopho somqashi: Khulisa izibopho zabaqashi maqondana nezilwane ezifuywayo. Isibonelo, umqashi kufanele agcine isilwanyana silawulwa, kufanele ahlanze ngemuva kwesifuyo, akumele agcine isilondolozi singagadiwe isikhathi eside. Yisho isikweletu somqashi uma isilwane sidala noma yikuphi ukulimaza impahla.
Faka nesigatshana esivumela ukuguqulwa kwesengezo ngokunikeza umqashi isaziso esifanele. Yisho ukuthi imithetho emisha ngeke isebenze kubaqashi asebevele benazo izilwane ezifuywayo ngaphambi koshintsho olwenziwe.
Zonke izinhlinzeko ezikulesi sengezo kufanele zihambisane nomthetho wombuso othintekayo noMthetho weZindlu eziLungile. Isibonelo, uma umnikazi womhlaba ethatha isinqumo sokuphoqelela imali yesilwane futhi edlula inani elilinganiselwe lediphozi yezokuphepha lapho umnikazi womhlaba angakhokhisa ngaphansi kwemithetho yombuso, leyo mali ngeke ibe semthethweni. Futhi, ukukhokhisa imali evela kumqashi ogcina isilwane njengomngane ukuze alungiselele ukukhubazeka kwakhe kungaba ukwephulwa komthetho we Fair Housing Act.
URoxana, umbhali ngokushayela ucingo futhi osifundile udale okuqukethwe okubabazekayo nokwamangalisa kwamawebhusayithi amaningi ekubonakaleni koMkhakha Wezamabhizinisi. Unokuqonda okulungile kokusebenza kwangaphakathi kwamabhizinisi amaningana asungulwa, kumenza uchwepheshe ophambili kulo mkhakha.